लकडाउनमा नगरपालिकाबाट राहत पाएपछि विपन्न परिवारमा छायो खुसीको लहर -
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २८, २०७७ समय: १०:०९:००
रामधुनीः रामधुनी नगरपालिका ९ की ७० वर्षिया सुगिया सदाले नगरपालिकाको तर्फबाट दुई पटक राहत सामग्री पाइन् । पहिलो चरणमा चामल, दाल, नुन, तेल र सावुन र दोश्रो चरणमा चामल र नुन पाइन् । उनको परिवारमा श्रीमान र एकजना छोरी गरी ३ जना छन््। छोराहरु अलग्गै बस्छन् । लक डाउनको अबस्थामा कही कतैबाट घर खर्च नआएपछी कसरी बिहान बेलुकाको छाक टार्नु भन्ने कुराले उनि चिन्तित थिइन । उनि मात्रै होइन, उनि जस्तै उनको वडाको टोलमा बस्नेहरु धेरै जना सोही चिन्ताले छटपटाईरहेका थिए । तर नगरपालिकाले विपन्न, गरिब र श्रमजीविलाई टोल टोलमा पुगेर राहत वितरण अभियान संचालन गरेसंगै उनी लगायतले राहत सामाग्री वापत खाद्यन्न पाएपछि गाँउभरी खुसीको लहरै आयो।
सोही ठाउँ बस्ने एकल महिला ६५ वर्षिया गिरिजा शाहले दुई चरणमा राहत पाइन् । यस्तै सोही ठाउँ बस्ने डम्मर सदाले राहत सामग्री प्राप्त गरेको बताए । सबै क्षेत्र बन्द रहेको यसतो अबस्थामा राहत सामग्रीले गरीब परीबारलाई हातमुख जोर्र्ने राहतले सघाउ पुगेको उनीहरुले बताए । उनिहरुमा पनि सुगिया सदाको झै त्यसबेला खुसी नआउने कुरै भएन ।
रामधुनी ९ स्थित मर्चैया गाँउमा एक सय सुकुम्बासी मजदुर परीबारको बसोबास रहेको छ । कोभिड १९, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न, देशमा चैत्र ११ गतेदेखी लागु गरिएको लकडाउनले गरिव, विपन्न, मजदुर परिवारका व्यक्तिहरु प्रभावित रहेका थिए । सबै क्षेत्र बन्द रहेको अवस्थामा विपन्न परिवारका लागि स्थानिय सरकारले राहत सामग्री वितरण गरेको हो । रामधुनीमा सुगिया, गिरिजा, डम्मर लाई मात्र हैन नगरभरी रहेका विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको थियो । रामधुनी नगरपालिकाले परिवार संख्याको आधारमा क, ख, ग वर्ग विभाजन गरी राहत वितरण गरेको थियो । क वर्ग १ देखी २, ख वर्ग ३ देखी ४, ग वर्ग ४ देखी माथि परिवार संख्या रहेको आधारमा वर्ग विभाजन गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा पहिलो चरणमा १ देखी ९ वडा सम्म ७३६६ परिवारमा राहत वितरण गरिएको थियो । क वर्ग १,४५६ परिवारलाई १० केजी चामल, १ केजी दाल, आधा लि. खाने तेल, नुन १ केजी र साबुन २ थान वितरण गरिएको थियो । ख वर्गको ३४८३ परिवारलाई चामल १५ केजी, दाल २ केजी, खाने तेल आधा लि., नुन १ केजी र साबुन २ थान वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी ग वर्गको २४२७ परिवारलाई २० केजी चामल, ३ केजी दाल, आधा लि. खाने तेल, १ केजी नुन र २ थान साबुन वितरण गरिएको थियो । त्यसतै दोश्रो चरणमा वर्ग अनुसार चामल र नुन वितरण गरिएको रामधुनी नगर पालिका कार्यालयका सूचना अधिकृत बसन्त मोतेले जानकारी दिए ।
नगरपालिका कार्यालयले राहतका लागि नगर प्रमुख जयप्रकास चौधरीको अध्यक्षतामा २४ सदसिय नगर स्तरिय विपद व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको थिायो । समितिले विभिन्न व्यक्ति संघ संस्थाबाट एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त राहत र नगरको बजेटबाट राहत सामग्री खरिद गरी वितरण गरेको हो । नगर प्रमुख जयप्रकास चौधरीले वडागत तहबाट राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । नगर प्रमुख चौधरीले राहत वितरणका लागि कानुनी जटिलता भएतापनि विपदको अवस्थामा जटिलतालाई छिचोल्दै प्रथम र दोश्रो चरणको राहत वितरण सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो ।
राहत कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शिता बनाउनका लागि नगर उप प्रमुख सविना कुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा नगरका विभिन्न दल, संघ संस्थाका प्रतिनिधी रहनेगरी अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । उप प्रमुख चौधरीले कोरोना कालमा वितरण गरिएको राहत विपन्न वर्गले पाएको जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिका कार्यालयले रामधुनी नगरपालिकाको स्थानिय राजपत्रमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ अनुसार राहत वितरण गरेको जनाएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओमकार न्यैपानेले स्थानिय तहमा रहेको राजपत्रको कार्यविधि अनुसार निर्देशिका पास गरी राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
रामधुनी नगरमा टोल विकास संस्था रहेको वडाहरुमा टोलविकास संस्थाहरुको सिफारिसमा र टोल विकास संस्था गठन नभएको वडामा वडा सदस्यहरुको सिफारिसमा राहत वितरण गरिएको जनाएको छ । रामधुनी वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष डेगराज फुयाँलले टोलविकास संस्थाको सिफारिसको आधारमा राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । सोही वडामा रहेको नव सिद्धार्थ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गणेश भट्टराईले विपन्न तथा मज्दुर परिवारलाई राहतका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । रामधुनी ९ का वडाध्यक्ष घनश्याम चौधरीले पारदर्शि तरिकाले राहत वितरण गरेएको बताउनुभयो । वडाध्यक्ष चौधरीले वडा सदस्यहरुले विपन्न परिवारलाई सिफारिस गरेको आधारमा स्थानिय दल र संघ संस्थाका प्रतिनिधी, सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा राहत वितरण सम्पन्न गरीएको भनाई छ ।
रामधुनी नगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखाका संयोजक रविन ठाकुरले दुई चरणमा वितरण गरिएको राहत सामग्रीको लागत जम्मा खर्च १ करोड, ४३ लाख, ८२ हजार ९१७ रुपैंया रहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणको राहतका लागि ६७ लाख ८५ हजार १ रुपैंया र दोश्रो चरणकालागि ५२ लाख ७२ हजार ७८० रुपैंया र राहत व्यवस्थापन खर्च २ लाख ४ हजार ६८० रुपैंया राहतका लागि खर्च भएको नगरपालिकाको खर्चविवरणमा उल्लेख रहेको छ । यस वाहेक विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्थाबाट संकलित राहत सामग्री चामल ३४ हजार ८२५ केजी, दाल ६९० केजी, तेल ३६० लि., नुन ७५१ केजी, साबुन ३५० थान, चिउरा ७० केजी, अन्डा ७३०० गोटा, १०० केजी न्युट्रेल र नगद रु. १ लाख ९२ हजार १ रुपैंया राहत विपन्न परिवारलाई वितरण गरिएको विपद व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।
कोरोनाकालमा विपन्न परिवारका लागि वितरण गरिएको राहतले गर्दा स्थानिय तहको जनता प्रति जिम्मेवारी बहन गरिएको देखिएको छ । राहत वितरण र खरिद कार्यमा सामान्य विवाद भएतापनि विपद व्यवस्थापन समितिले सहजढंगबाट समस्याको सामाधान गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी र रामधुनी नगरपालिकाको सहकार्यमा लेखनवृतिका लागि तयार पारिएको सामाग्री ।